6 Maekisesaizi ekudzivirira Akakoshesa Neck Osteoarthritis (Osteoarthritis yeNeck)
16 / 03 / 2019 /0 Comments/i Osteoarthritis (Osteoarthritis), Kurovedza muviri uye kurovedza muviri/av kundikuvadza
Osteoarthritis yemutsipa inogona kukonzera kurwadziwa kwemutsipa uye kusagadzikana kwekufamba.
Heano maatanhatu ekurovedza muviri (kusanganisira VIDEO) kune avo vane mutsipa wemutsipa uyo unogona kudzoreredza kurwadziwa nekupa zvirinani kufamba. Inzwa wakasununguka kugovera chinyorwa ichi kune mumwe munhu ari kutambudzika nekurwadziwa kwemutsipa.
Osteoarthritis yemutsipa inogona kusanganisira kuparara kwetikoroti, calcification, mafupa emabhonzo uye kupfeka kwekubatana - izvi zvinogona kutungamira kune akaomarara nzvimbo mamiriro mukati memutsipa uye episodic kupisa maitiro. Osteoarthritis yemutsipa inogonawo kuwedzera zviitiko zvekurwadziwa kwemusoro uye mutsipa-inoenderana nehuro.
Isu tiri kurwira kuti munhu wese anorwara nekurwadziwa arware uye rheumatism ave nemikana iri nani yekurapwa nekuferefetwa - chimwe chinhu chisina kubvumiranwa nemunhu wese, zvinosuwisa. Kufanana nesu pane yedu FB peji og yedu YouTube chiteshi munhau dzemagariro kuti ubatane nesu mukurwira hupenyu hwakavandudzwa hwemazuva ese kuzviuru zvevanhu.
Pano tichakuratidza matanhatu maekisesaizi akakosha emutsipa osteoarthritis - izvo zvaunogona kuita zuva nezuva.
Kuenderera mberi pasi muchinyorwa, iwe unogona zvakare kuverenga zvakataurwa kubva kune vamwe vaverengi - pamwe nekutarisa rakakura rekudzidzisa vhidhiyo ine mutsipa kurovedza. Ikoko iwe unowanawo zvimwe zvinokurudzirwa-pachako matanho ayo angave akakukodzera iwe ne osteoarthritis.
VIDEO: Maekisesaizi matanhatu achipesana Neanokosha Neck Osteoarthritis
Pano, chiropractor Alexander Andorff anokuratidza iwe mitanhatu maekisheni isu atinopfuura muchinyorwa chino. Pazasi apa unogona kuona tsanangudzo dzakadzama dzekuti maitirwo emabasa ezvivakwa anofanira kuitwa sei muchikamu 1 kusvika ku6. Dzvanya pazasi kuti utarise vhidhiyo.
Inzwa wakasununguka kunyoresa pachiteshi chedu - uye tevera peji redu kuFB yemazuva ese, mazano emahara ehutano uye zvirongwa zvekurovedza muviri izvo zvinogona kukubatsira iwe kusvika kune hutano hwakanaka.
1. Kumira Kukwasva neElastic
Kudzidzira neelastic ndiyo nzira yakanakisa yekusimbisa yekumusoro kumashure uye nepakati pamafudzi mapepa - ndiko kuti, chikuva chemutsipa wako pachawo. Kuvandudzwa kwebasa uye kufamba mune ino mijenya kunorevawo kurongeka kwakanyanya uye kufamba kwemitsipa yako.
Ichokwadi kuti kana iwe uri unonamira-wakasindimara pakati pemapendekete, izvi zvichapfuura mutsipa wako mutsara uye nekubatana kunofambidzana. Ichi chiitiko chinogona nekubatsira iwe kuti uve nekunaka kwakanaka mumutsipa.
Mira wakananga kumusoro uye pasi.
Sakanidza iyo elastiki pachigadziko chemusuwo kana zvimwe.
Dhonza iyo yakasununguka yakanangana newe nemaoko maviri - kuitira kuti mapendekete adhonwe pamwechete.
Dzokera kunzvimbo yekutanga.
Dzokorora chiitiko icho chegumi kakapetwa katatu seti.
2. Kubvumirana kwemapendekete
Vanhu vazhinji havazivi kuti vangani vematambudziko emutsipa anouya chaizvo pakati pemapfudzi. Kuderera kwekubatana kwekubatana uye mhasuru dzakaomarara munzvimbo ino zvinogona kuenda zvakaoma kupfuura basa rako remutsipa - uye kunyanya kana uine osteoarthritis. Izvi zvinogona kubatsira kuderedza kushungurudzika kwemutsipa mumutsipa.
Zvishoma nezvishoma dhonza mapepa epafudzi uchidzokera kumashure kusvikira amira pachawo - bata chinzvimbo chekunze kwemasekonzi 3-5.
Ita iko kufamba pamwe nekunyarara kufamba.
Dzokorora iro chiito kagumi pane matatu seti.
Vanhu vakawandisa vanonetsekana nemarwadzo ekusingaperi vanoparadza hupenyu hwezuva nezuva - ndosaka tichikurudzira kuti Goverana chinyorwa ichi mune zvemagariro enhau, Inzwa wakasununguka kuda yedu Facebook peji uye uti, "Hongu kutsvakisisa kutsvagurudzo yezvirwere zvisingaperi". Nenzira iyi, unogona kuita kuti zviratidzo zvechirwere ichi zvioneke zvakanyanya uye uve nechokwadi chekuti vanhu vazhinji vanotorwa zvakanyanya uye vawane rubatsiro rwavanoda.
Isu tinotarisirawo kuti kutarisisa kwakadai kunogona kutungamira kune yakanyanya mari yekutsvagisa nezvenzira nyowani dzekuongorora uye nzira dzekurapa.
Verenga zvakare: - 15 Ekutanga Zviratidzo zveRheumatism
Iwe unokanganiswa here ne rheumatism?
3. Ndebvu dzinosimudza
Ichi chiitiko chinobatsira kuchengeta kuyerera kweropa kune mamwe makuru kwazvo emitsipa - kugara uchirovedza muviri kuchakwanisa kukubatsira kudzikamisa mhasuru dzemitsipa dzakachengetedza uye kutenderera kweropa kwenzvimbo dzakatenderedza majoini akasakara.
Sezvandakareva, havazi vanhu vazhinji vanoziva kuti huwandu hwemitsipa yemutsipa hunobatana nemabendekete kana kumashure ekumusoro. Izvi ndizvo chaizvo chikonzero nei zvichikosha kuti chengetedza izvi kana uchida kushandira kurwara nemutsipa diki muhupenyu hwezuva nezuva.
Kugara uchingofamba uye kushandiswa kwakakodzera zvakare kuchaderedza mukana wekuenderera mberi kukura kwechirwere chemoyo. Ndiro zvinovaka mukati mekutenderera kweropa rako rinoita sekuvaka zvinhu zvekugadzirisa majoini akapfeka uye mhasuru dzemhasuru.
Mira wakananga kumusoro uye pasi nemaoko ako parutivi rwako.
Simudza pfudzi rimwe mukudzikama uye kudzora kwekufamba.
Dzokorora chiitiko ichi kagumi parutivi rumwe nerumwe pamusoro pe10 seti.
Wakanga uchiziva here kuti vanhu vazhinji vane osteoarthritis inoshuma kuvandudzwa kwemuviri kuburikidza nekugara uchirovedza muviri padziva remvura inopisa? Nekurovedza muviri mumvura, kune dzinoverengeka maekisesaizi izvo zviri nyore kuita kune avo akakosha osteoarthritis uye osteoarthritis yemutsipa. Mvura inodziya inobatsirawo kuchengeta ropa kuyerera uye kusunungura tsandanyama mutsipa kushushikana.
Verenga zvakare: - Inobatsira Sei Exercise Mune Hot Mvura Puru Pane Fibromyalgia
4. Neck flexion (Kutambanudza kweShure Neck)
Nekugara uchiuraya, kutambanudza kunogona kubatsira kuchengeta tsandanyama mumutsipa zvakanyanya kuwedzera uye kusimuka. Asi waiziva here kuti kune vazhinji vanotambanudza zvakanyanya? Iyo yekutanga seti yekutambanudza inofanirwa kugara yakadzikama kwazvo - kuitira kuti mhasuru dzinzwisise kuti "ikozvino ichatambanudzwa".
Vanhu vazhinji vane chirwere chemutsipa chetsipa vanotambura nemutsipa wakakosha uye mitsipa yakaoma yemutsipa. Ichi chipfeko chiitiko chinogona kubatsira kudzikamisa zvimwe zvezvirwere izvi.
Bata musoro nemaoko maviri. Wobva waendesa musoro wako kumberi zvishoma nezvishoma.
Iwe unofanirwa kunzwa kuti inotambanudza zvinyoro nyoro kumashure kwemutsipa.
Bata rinotambanudza kwemasekonzi makumi matatu pamusoro pe30 seti.
5. Ruoko rwakatambanudzwa (Side anotambanudza mutsipa)
Wakave wakamboona kuti mutsipa weArmoni wakonzera kushanya kwakapfuura kwemutsipa? Ichi chiitwa chekutambanudza chinotarisa pamhasuru dzatinowana padivi pemutsipa - kusanganisira levator scapulae uye yepamusoro trapezius.
Iko kurovedzera kunogona kuitwa ndakagara kana kumira.
Bata musoro wako neruoko rumwe.
Nyorovera musoro wako kudivi.
Iwe unofanirwa kunzwa kuti inotambanudza zvinyoronyoro kune rimwe divi remutsipa.
Iko kurovedza kunoitwa kwemasekonzi makumi matatu pamusoro pe30 seti.
Mune chinyorwa pazasi, iwe uchaona shanu dzakarongedzwa kurovedza muviri izvo zvinokwanisawo kukushandira iwe nechirwere chemeso chetsipa. Nenzira, yakagadziriswa maitiro ekurovedza muviri inzira huru yekuchengeta kutenderera kweropa rako pamwe nekudyidzana kwerumwe mvura mukati menhengo dzako.
Verenga zvakare: - 5 Exercises kurovedzera kune avo vane Fibromyalgia
Dzvanya kumusoro kuti uone izvi zvekudzidzisa maitiro.
6. Bvudzi rinotambanudza nebhutsu mubato kana nzimbe
Ichi chiitiko chinokubatsira kuti udzorezve kufamba uye kufamba mumapfudzi uye mapendekete. Nekushandisa nzimbe kana zvakafanana, iwe unozogona kufamba zvishoma nezvishoma maoko ako padhuze pamwe nekunzwa kuti inosvika mushe munzvimbo yehuro uye mapendekete.
Mira wakananga kumusoro uye pasi - uine tsvairo kana yakafanana.
Fambisa shaft iri kumashure uye riine ruoko rumwe rwakakwirisa pane shaft - rwumwe ruderere pasi.
Dhonza maoko ako padhuze nepadhuze kusvika iwe wanzwa kuti anotambanuka zvakanaka.
Chiitiko ichi chinoitwa nemaoko maviri aine gumi dzekuenda kudzokorora pamusoro pe10 seti.
Vanhu vazhinji vane mutsipa osteoarthritis vane zvakare kupfeka kwekubatana mune zvimwe zvikamu zvemuviri - zvakaita semabvi. Wanga uchiziva here kuti osteoarthritis yakakamurwa muzvikamu zvishanu zvakasiyana - zvichibva pakukuvadza kwakaita mubatanidzwa wekupfeka? Muchinyorwa pazasi iwe unogona kuverenga zvimwe pamusoro pezvikamu zvakasiyana zvemoyo wemaziso emabvi uye kuti mamiriro ezvinhu anokura sei.
Verenga zvakare: - Iwo Matanho mashanu eKnee Osteoarthritis
Mamwe ruzivo? Joinha boka iri!
Joinha boka reFacebook «Rheumatism uye Chirwere Chisingaperi - Norway: Kutsvaga uye nhau»(Dzvanya apa) ezvazvino zvekugadzirisa patsvagurudzo nekunyora kwenhau nezve rheumatic uye chirwere chisingaperi. Pano, nhengo dzinogona zvakare kuwana rubatsiro uye rutsigiro - panguva dzese dzezuva - kuburikidza nekuchinjana kwavo kwavo uye nezano.
Joinha mhuri, inzwa wakasununguka kuzvinyoresa pachiteshi chedu (tinya pano) - uye uteedzere peji redu paFB kune matipi ezuva nezuva ezvehutano uye zvirongwa zvekurovedza muviri.
Tinotarisira nemoyo wese kuti chinyorwa ichi chinogona kukubatsira iwe pakurwisa rheumatic kusagadzikana uye kurwadziwa kusingaperi.
Mazano ekuti ungabatsira sei kurwisa kurwara kusingaperi
Tinya bhatani iri kuti ugone kuenderera mberi. Kutenda kukuru kune wese munhu anobatsira kusimudzira kunzwisisika kwekurwara kusingaperi kwekurwadziwa kunoongorora!
NEXT PAGE: - Izvi Unofanirwa Kuziva Nezve Osteoarthritis Mumaoko Ako
(Pane yedu Youtube chiteshi iwe unowana yakachengetwa yakakura yemavhidhiyo ekurovedza muviri uye zvirongwa zvekurovedza muviri izvo zvinogona kukubatsira kuti udzoke kuzuva risingarwadze. Inzwa wakasununguka kunyoresa kuchiteshi.)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Øvelser-mot-Betydelig-Nakkeartrose.jpg?media=1648573622 368 700 kundikuvadza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 kundikuvadza2019-03-16 19:12:352021-03-24 10:59:036 Maekisesaizi ekudzivirira Akakoshesa Mutsipa Osteoarthritis
7 Kurapa kwechisikirwo kwePsymaasis Arthritis 9 Zviratidzo Zvepakutanga zvePfungwa